Ambohidratrimo : sinoa iray notafihin-jiolahy nitondra Kalachnikov | NewsMada
Ambohidratrimo : sinoa iray notafihin-jiolahy nitondra Kalachnikov
Nisehoana fanafihan-jiolahy any Soamanandray Ambohidratrimo, ny alahady teo tokony ho tamin’ny 1 ora maraina. Araka ny vaovao avy amin’ny zandarimaria, notafihina enin-dahy nirongo basy Kalachnikov ilay Sinoa io tao amin’ny tranony. Norahonan’ireo jiolahy ny mpiambina ny tanàna ary nofatorany. Niditra tao an-trano ny efa-dahy ary nandrahona ilay Sinoa tokony ho 60 taona. Ity farany izay talen’ny orinasa Fhan Mada.
Noterena hamoaka vola ilay Sinoa io ka lasan’ireo olon-dratsy ny vola 23 tapitrisa Ar niampy ordinatera sy fitaovana elektronika maro. Nandritra ny fitsoahan’ireo jiolahy, nanapoaka basy intelo izy ireo nampitahorana ny manodidina. Olona iray saika hanampy ireo voatafika no naratra voatifitra tamin’izany. Tonga teny an-toerana ny zandary, saingy tsy nisy tratra ireo olon-dratsy na iray aza. Nentina tany amin’ny hopitaly avy hatrany ilay naratra io.
Vao ny asabotsy teo ihany koa, nisy fanafihana teny amin’ny faritra Ambohidratrimo iny. Voalaza tamin’izany fa voatafika ny trano dimy. Tamin’ireo kosa anefa, fantatra fa basy kilalao ny nampiasain’ireo jiolahy ireo. Enin-dahy ihany koa ireo nanafika tamin’izany. Tsy nisy tratra ireo na iray aza. Tamin’ity fanafihana sinoa ity, nampiasa Kalcahnikovny jiolahy. Fitaovam-piadiana mahery vaika fampiasan’ny mpitandro filaminana mihitsy io. Avy aiza ny fiavian’ireo basy ireo. Raha basy kilalao mantsy, fanararaotana ny horohoron’ny olona amin’ny tsy fandriampahalemana izany.